အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်သနည်း - Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd.
● Hi-Tech ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကကုန်ထုတ်ပစ္စည်းများကို Japan (Panasonic နှင့် Omron) နှင့် Germany (KUKA) တို့မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပါသည်။
● ခိုင်မာသော R&D စွမ်းအား
2020 နှစ်ကုန်တွင် Action သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ် မူပိုင်ခွင့် 58 ခု၊ မူပိုင်ခွင့် 55 ခု ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D စင်တာတွင် အင်ဂျင်နီယာ 37 ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အီလက်ထရွန်နစ်သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့လွန် သို့မဟုတ် အထက်တန်းအောင်သူများဖြစ်သည်။
● ဖလှယ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
အမျိုးသား မက်ထရိုဗေဒ ဝန်ထမ်း စစ်ဆင်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး စခန်း။တရုတ်နိုင်ငံရှိ IoT နည်းပညာနယ်ပယ်ရှိ ကျော်ကြားသော လုပ်ငန်း 20 ခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။Chengdu ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာသုတေသနစင်တာ။ကျွန်ုပ်တို့သည် CNPC၊ Sinopec၊ CNOOC စသည်တို့၏ ပထမတန်း ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
● OEM & ODM လက်ခံနိုင်သော
စိတ်ကြိုက်လိုဂို၊ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။သင့်စိတ်ကူးကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန် ကြိုဆိုပါသည်၊ ဘဝကို ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စေရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။
● ဖြန့်ဖြူးသူများကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဖြန့်ဖြူးသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။
● တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
● 1.Core ကုန်ကြမ်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ- အာရုံခံကိရိယာများကို ဂျပန်၊ ယူကေ၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံတို့မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပါသည်။.
● 2. သိပ္ပံနည်းကျ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ ထူထောင်ခြင်းမှ ပေးသွင်းသူ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုအထိ၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှ ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း စမ်းသပ်မှု ကန့်သတ်ချက်အထိ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ အရည်အသွေးကို တိကျသော အချက်အလက်ဖြင့် စံသတ်မှတ်ပါ။
● 3. လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံ သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဆင့်မြင့် စက်ရုံကုန်ထုတ်မှုစနစ် (MES：Manufacturing Executive System) ကို လက်ခံကျင့်သုံးရာတွင် ဦးဆောင်ပါ။ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုမှ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းအထိ၊ စစ်ဆေးခြင်းမှ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အထိ၊ ပေးပို့မှုအဆင့်တိုင်းကို တိကျစွာခြေရာခံနိုင်သည်။အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက်စေရန်အတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဒေတာစနစ်၊
● 4. အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်
ပြီးပြည့်စုံသော အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ အလိုအလျောက်အိုမင်းခြင်းစနစ်၊ အလိုအလျောက်ဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်သော အလိုအလျောက် ချိန်ညှိစနစ်၊ ထောက်လှမ်းမှုစံချိန်စံညွှန်းများသည် မိုက်ခရိုအဆင့်အထိ တိကျပါသည်။
● 5. အချောထည်ပစ္စည်းများ စမ်းသပ်ခြင်း။
မီးလောင်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေး, မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်, ဓာတ်ငွေ့ detector, တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်း, lpg ဓာတ်ငွေ့ detector, ပုံသေဓာတ်ငွေ့ detector,